Mpitarika Vaovao sy Vehivavy Tsy Natahotra | Tantara ao Amin’ny Baiboly
HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Baoulé Bashkir Basque Bassa (Cameroun) Batak (Karo) Batak (Toba) Biak Bichlamar Bicol Boligara Boulou Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuabo Cinghalais Dangme Danoà Dayak Ngaju Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fitenim-paritra Alemà Fon Frantsay Ga Galicienne Garifuna Goun Grika Guarani Géorgien Haoussa Herero Hiligaynon Hindi Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Iban Ibinda Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Irlandey Isoko Italianina Javaney Jula Kabiyè Kabuverdianu Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Letonianina Lhukonzo Lingala Litoanianina Lomwe Luganda Luo Luvale Macua Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Marshall Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Miskito Mixe (Afovoany) Mixtèque (Guerrero) Mooré Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Ngangela Nias Norvezianina Nyaneka Nyungwe Nzema Okpé Oromo Ossète Otetela Ouzbek Ouzbek (Romanina) Pangasinan Pendjabi Pidgin (Cameroun) Pidgin Nizerianina Poloney Ponape Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quiché Romanianina Rosianina Rutoro Rômania (Macédoine) Sirilika Samoanina Sangir Sango Sena Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Slovaky Slovenianina Soedoà Soundanais Sranan Tongo Swahili Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tandroy Tankarana Tarasque Tatar Tenin’ny Tanana Alemà Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Britanika Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanan’ny avy any Cuba Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tenin’ny Tanan’ny avy any Taïwan Tigrigna Tiorka Tiv Tlapanèque Tojolabal Tongan Totonac Tseky Tshwa Tsonga Twi Tzotzil Télougou Umbundu Urhobo Uruund Valencienne Venda Vezo Vietnamianina Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zapoteky (Lachiguiri) Zoloa tzeltal Édo Éwé
I Josoa no nitarika ny vahoakan’i Jehovah nandritra ny taona maro. Nanompo an’i Jehovah foana ny Israelita tamin’izay. Rehefa maty anefa i Josoa tamin’izy 110 taona, dia nanompo sampy hoatran’ny Kananita ry zareo. Navelan’i Jehovah hampijaly an-dry zareo àry i Jabina mpanjaka kananita. Nijaly be ny Israelita ka nangataka fanampiana tamin’i Jehovah. Nasain’i Jehovah hitarika an-dry zareo àry i Baraka, amin’izay ry zareo miverina amin’i Jehovah.
I Debora no mpaminanivavy tamin’izay. Hoy izy tamin’i Baraka: ‘Mitondrà lehilahy 10 000, hoy i Jehovah. Dia mandehana miady amin’ny miaramilan’i Jabina eo amin’ny reniranon’i Kisona. Ho resinao eo mantsy i Sisera, lehiben’ny tafik’i Jabina.’ Dia hoy i Baraka tamin’i Debora: ‘Handeha aho raha miaraka amiko ianao.’ Hoy i Debora: ‘Andao àry. Fa tsy ianao anefa no hamono an’i Sisera, hoy i Jehovah, fa vehivavy anankiray izay.’
Dia lasa i Debora niaraka tamin’i Baraka sy ny miaramilany nankeny amin’ny Tendrombohitra Tabara. Vao fantatr’i Sisera izany, dia nangoniny terỳ ambanimbany terỳ ny miaramilany sy ny kalesy fitondra miady. Hoy i Debora tamin’i Baraka: ‘Ataon’i Jehovah mandresy ianao androany.’ Nidina hiady tamin-dry Sisera àry i Baraka sy ny miaramilany.
Dia nataon’i Jehovah tondraka be ny reniranon’i Kisona avy eo. Lasa tsy afaka nandeha ny kalesin-dry Sisera satria nisy fotaka be. Resin-dry Baraka àry ny miaramilan’i Sisera. I Sisera kosa lasa nitsoaka ka navelany teo ny kalesiny. Dia niafina tao an-tranolain’izay vehivavy atao hoe Jaela izay izy. Nomen’i Jaela ronono izy ary norakofany bodofotsy, dia tafatory be. Nijaikojaiko i Jaela avy eo dia notsatohany fantsika be ny lohan’i Sisera, dia maty izy.
Tonga hitady an’i Sisera tao amin’i Jaela avy eo i Baraka. Dia hoy i Jaela: ‘Mandrosoa fa atoroko anao ilay olona tadiavinao.’ Dia hitany tokoa i Sisera saingy efa maty. Faly be i Baraka sy Debora ka niara-nihira fiderana an’i Jehovah. Raha tsy nampiany mantsy ny Israelita, dia tsy ho resy ny fahavalony. Nilamina indray tany Israely nandritra ny 40 taona taorian’izay.
“Tafika lehibe ny vehivavy manambara ny vaovao tsara.” —Salamo 68:11
Fanontaniana: Inona no nataon’i Debora mba hanampiana ny Israelita? Nahoana i Jaela no hita hoe tsy natahotahotra?
‘Nitsangana ho Reny teo Amin’ny Israely Aho’
Inona no ianarantsika momba ny finoana sy ny herim-po, rehefa jerena ny tantaran’i Debora ao amin’ny Baiboly?